Filtrer les éléments par date : mardi, 15 décembre 2020
Pilo kely : Ataova am-pôso fo frais retour
Anao koa efa mandeha, hoy mamako zay, ataova am-pôso fo frais retour, ko misy problèmo, modia, aza mihina varin'ampango antragnon'olo.
Samy mandry mifôha.
mardi, 15 décembre 2020 21:47
Fampianarana : 3 290 000 ireo zaza Malagasy tsy tafiditra an-tsekoly
Nitatitra ara-tarehimarika ny zava-misy eo anivon’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena ny minisitra Dr Sahondrarimalala Marie Michelle, androany talata 15 desambra 2020, teny amin’ny CCI Ivato nandritra ny fametraham-panontaniana arahim-baliny izay ifanatrehan’ny Andrim-pajakana mpanatanteraka (Governemanta) sy ireo Solombavam-bahoakan’i Madagasikara.
Nandritra izany no nilazany fa 3 290 000 ireo zaza Malagasy tsy tafiditra an-tsekoly ; 41 000 ireo lakilasy ratsy, tena ratsy.
Hahazo karama 3 volana ireo mpampianatra FRAM « non subventionnés » miisa 56 000.
mardi, 15 décembre 2020 21:41
« Doublons » tamin’ny lisi-pifidianana : Miroso ny fanadihadiana ataon’ny eo anivon’ny Antenimierandoholona
Nandray ireo avy ao amin’ny KMF/CNOE sy ny firaisamonim-pirenena ROHY ary ny avy ao amin’ny “Imprimérie nationale” ny Vaomiera misahana ny fanadihadiana eto anivon’ny Antenimierandoholona androany talata 15 desambra 2020.
Nandinika manokana ny mahakasika ny fisian’ny « doublons » tamin’ny lisi-pifidianana nandritra ny fifidianana notanterahina teto Madagasikara teo.
Nomarihin’ny Loholon’i Madagasikara Rakotovazaha Olivier, fa mialoha ny tena hifaranan’ny fotoam-piasan’izy ireo dia ezahina vitaina ny fandaharam-potoana rehetra mahakasika ny fanadihadiana atao ka hatolotra ny Filohan’ny Antenimierandoholona sy hampafantarina ny Vahoaka amin’ny alalan’ny gazetim-panjakana ny valiny rehetra, araka ny voalazan’ny lalàna sy ny fitsipika anatiny mifehy ny Antenimierandoholona.
mardi, 15 décembre 2020 21:36
« Vacances judiciaires» : Nahemotra ho amin’ny 25 desambra
Isan-taona dia miditra amin’ny « Vacances judiciaires» ny Fitsarana eto Madagasikara rehefa misasaka ny volana desambra, ary maharitra iray volana eo izany.
Nanambara ny minisitry ny Fitsarana Andriamahefarivo Johnny Richard, androany talata 15 desambra 2020, teny amin’ny CCI Ivato nandritra ny fametraham-panontaniana arahim-baliny izay ifanatrehan’ny Andrim-pajakana mpanatanteraka (Governemanta) sy ireo Solombavam-bahoakan’i Madagasikara, fa nahemotra ho amin’ny 25 desambra ny « vacances judiciaires» amin’ity taona ity mba hahafahana manafaingana ny fitsarana ireo raharaham-pitsarana miangona.
mardi, 15 décembre 2020 21:34
Gadra nitsoaka tao Farafangana : Mbola misy 16 tadiavina hatreto
Nanamafy nanoloana ireo solombavambahoaka mivory ao amin’ny CCI Ivato ny minisitry ny Fitsarana Andriamahefarivo Johnny Richard, fa mbola 16 tamin’ireo voafonja nitsoaka ny fonjaben’i Farafangana no karohina amin’izao fotoana izao.
Ny alahady 23 aogositra 2020 no vaky ny fonja, ka voafonja niisa 88 tamin’ireo 357 no tafatsoaka. Nisy 20 mahery namoy ny ainy voatifitra, ary 16 no mbola tadiavina.
mardi, 15 décembre 2020 21:33
Fahasalamam-bahoaka : Voan’ny « drépanocytose » ny 10% ny mponina eto Madagasikara
Voamarina fa 10% ny mponina eto Madagasikara dia mifaingosela na voan’ny« drépanocytose » avokoa araka ny fanadihadiana nataon’ny teo anivon’ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Mbola maro ireo tsy mahafantatra ny aretina faingosela, izay aretin'ny selamena ka mety hanapaka lalan-drà na hahatonga tsy fahampian'ny rà ao amin'olona iray.
Misy ny atrikasa ho fankatoavana ny paikady nasionaly ho an'ny ady atao amin'ny faingosela teo anivon'ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka androany Talata 15 desambra, ahafahana mandrindra ny andraikitry ny tsirairay mba ahazahoan’ireo marary misitraka ny fitsaboana sahaza azy ireo.
mardi, 15 décembre 2020 13:27
Air Madagascar : Atsasa-karama no raisin'ny mpiasa
Manolona ny fahasahiranana goavana sedrain'ny orinasa fitanterana an'abakabaka Air Madagascar, dia nanapa-kevitra ireo mpitantana fa ahena 50% ny karaman'ny mpiasa mandritra ny 3 volana, hatramin'ny volana marsa 2021.
Nanomboka ny volana aprily 2020 no tsy nisy sidina intsony ny Air Madagascar, tsy misy vola miditra arak'izany, nefa ny fiara-manidina hofaina tsy maintsy aloa vola hatrany, ireo prestataires na mpanao asa ivelany, tsy azo ialana, omena vola hatrany, ny karama volana novambra efa tsy voaloa.
Ankehitriny dia mbola mikatona ny sisin-tany malagasy vokatry ny Covid-19. Misy kosa ireo sidina fampodiana ireo tera-tany malagasy monina any ivelany, fa dia miantoka ny saran-dàlana mandroso sy miverina izy ireny.
mardi, 15 décembre 2020 13:18
Fanjarian-tsakafo any atsimo sy atsimo atsinanana : Nanome 100 tapitrisa dolara ny governemanta amerikana
Misy tetikasa vaovao telo vatsian'ny Sampandraharaha Amerikana Misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID) vola ka itondran’i Etazonia 100 tapitrisa dolara fanampiny hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara.
Amin'ny alàlan'ireo tetikasa ireo ny governemanta amerikana no hiara-miasa akaiky amin'ny fanjakana malagasy ka hamaly ny filana maikan’ireo fianakaviana tratry ny hanoanana, ary hitondra vahaolana maharitra ho an’ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimo sy atsimo atsinanan’ny Nosy.
Ny tetikasa Firangà an'ny USAID dia hitondra fanampiana vonjy maika mitentina 10 tapitrisa dolara ho an'ny mponina maherin’ny 222 000 any amin'ny faritra Atsimo Andrefana sy Androy izay tena voa mafy.
Ity tetikasa ity dia hitsabo ihany koa ny vokatry ny tsy fahampian-tsakafo eo amin'ny zaza latsaky ny dimy taona. Ny Catholic Relief Services no hanatanteraka ny tetikasa Firangà.
mardi, 15 décembre 2020 13:09
Antenimieram-pirenena : Misalasa ireo depiote momba ireo fiampangana manoloana ny Fitsarana Avo
Nodinihin’ireo Solombavambahoaka ny alatsinainy 14 desambra 2020 teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza ny tolo-pehin-kevitra misahana ny fiampangana manoloana ny Fitsarana Avo.
mardi, 15 décembre 2020 13:03
Fitsarana miaramila : Eny amin'ny kianjan'ny Betongolo ho an'ny Antananarivo Renivohitra
Toerana tokana dia eny amin'ny kianjan'ny Betongolo no anatanterahana izany fitsarana miaramila ho an'ny Antananarivo Renivohitra.
Talata sy alakamisy ho an’ny tovovavy, raha ny alarobia sy zoma ny fitsarana miaramila ho an’ny tovolahy.